Jide na-enye ya niile site n'ịkpọsa usoro nke Remix ngwaọrụ | Androidsis
Osisi os de Jide bụ ụdị Android mepere emepe nke ahaziri na a desktọọpụ sistemụ na na n'oge na-adịbeghị anya na-enweta ọtụtụ nlebara anya site n'aka ọtụtụ ndị ọrụ. Mbadamba ụrọ Remix bụ ụdị ọzọ n'ụdị Microsoft's Surface, na Remix mini PC kwere anyị nkwa ọdịnihu dị mma maka OS a na-achọ ịmata ihe nke nwere ezigbo omume ọma.
Taa, anyị nwere ike ịtụ anya n'ọdịnihu na-ekwe nkwa na usoro ngwaọrụ ndị nwere ụdị ọhụrụ nke ma mbadamba na obere PC, yana ihe bụ nnukwu ọhụụ na Acer iji weta Remix OS na ngwaọrụ ndị ọzọ. Nke dị ike karịa bụ Remix Pro, ụdị nke abụọ nke mbadamba nkume Remix OS. N'ime njirimara ya kachasị ama, anyị nwere ike ịchọta ihuenyo 12-inch ya na mkpebi 2160 x 1440, mgbawa Snapdragon 652, 3 GB nke RAM, 32 GB nke nchekwa dị n'ime na oghere maka kaadị micro SD wee si otú ahụ gbasaa ebe nchekwa.
1 Ngwa Remix ọhụrụ
Ngwa Remix ọhụrụ
Ewezuga ngwaike ahụ nke ejiri ihuenyo inch 12 mara, mgbawa Snapdragon 652, 3 GB nke RAM, 32 GB nke ebe nchekwa dị n'ime yana oghere microSD, o nwekwara oghere. 8MP na 5MP n'azụ na n'ihu igwefoto n'otu n'otu. Ọ nwekwara batrị 9.000 mAh na ọkpụrụkpụ nke 6,9 mm. Dị ka nke mbụ, Remix Pro nwere ụdị dị n'elu ya na ikpe na ahụigodo, n'agbanyeghị na a ga-ere ya iche.
Anyị nwekwara ụdị ọhụrụ nke ngwaọrụ desktọpụ Remix, ọ bụ ezie na ebe a njirimara dị na ngwaike adịchaghị mma. O nwere a Rockchip 2268 CPU, 1 ma ọ bụ 2 GB nke RAM na naanị 8 ma ọ bụ 16 GB nke nchekwa n'ime, ewezuga ihe nwere ike ịgbasa ebe nchekwa site na microSD. Ụdị ọhụrụ a gụnyere Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet na HDMI nkwado maka ngosipụta nwere mkpebi 4K na okpokolo agba 60 kwa sekọnd. Banyere ụdị a, ekwesịrị ịmara na echiche Jide bụ ịbụ onye a kwadebere maka ndị nrụpụta, yabụ anyị nwere ike ịhụ ya n'okpuru ụdị dị iche iche mgbe ọ na-akụ ahịa.
Acer pụtakwara n'ebe a kwupụta ọkwa ya enwere ike ibugharị ya na Remix, ES1-131. N'onwe ya, ọ bụ laptọọpụ dabeere na Intel nke nwere ihuenyo 11,6-inch na nke na-eji Celeron, nke pụtara na anyị agaghị eche ngwaahịa dị ike ihu, ma anyị nwere ike ikwu na ọ bụ ihe ọzọ na Chromebook ma ọ bụ ihe ndị ọzọ dị ala. laptọọpụ ..
Laptọọpụ na-eji a Quad-core processor kpuchiri na 1.6 GHz 64-bit, 4 GB nke RAM, nchekwa ime 500 GB yana ihuenyo nwere mkpebi 1366 × 768.
Ewezuga ihe nlereanya a, AOC kwuputara ngwaọrụ ndị ọzọ nke na-arụ ọrụ na Remix na usoro Mars nke PC niile dị n'ime otu, nke pụtara na a na-etinye ihe niile na nyocha. Ewezuga ụdị inch 24 nke Mars all-in-one, a ga-enwe ụdị inch 22 na nnukwu nke ruru ihe ruru sentimita 32. Ha atọ na-eji Amlogic s905 processor, 2GB nke RAM, 16 ma ọ bụ 64GB nke ebe nchekwa dị n'ime, yana ngosipụta 1080p n'ụdị niile.
Ngwaahịa niile anyị kwurula nwere Remix OS na ụdị 3.0 ya dabere na gam akporo Marshmallow ma anyị amaghị ọnụ ahịa ya. Ihe anyị maara bụ na ha ga-eru ahịa ndị China. Yabụ, maka ugbu a, n'akụkụ ndị a, anyị ga-edozi maka ihe ga-abụ azụmaahịa nke ngwaahịa ndị a na mba ụwa. Ihe anyị hapụrụ bụ mmetụta na Remix OS nọ ebe a na ọ gaghị abụ naanị ụdị, dị ka Acer, ga-amalite ịmalite ngwaahịa na OS a nke nwere ike gbanwee gam akporo ka ọ bụrụ usoro desktọpụ nke ga-ama jijiji. ọtụtụ ndị ọrụ maka ike ibugharị ya.
Dị ka ọchịchọ ịmata, tupu ịpụ n'anya, otu n'ime ndị malitere ọrụ Android x86, Chich-Wei Huang, esonyela Jide, yabụ anyị ga-ahụ ọtụtụ ihe Remix na ọnwa ndị na-abịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mbadamba gam akporo » Jide mara ọkwa Remix Pro mbadamba, Remix mini PC na Acer laptọọpụ, niile na-agba ọsọ Remix OS 3